It is me. Ko Niknayman.: နအဖထောင်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် အခြေအနေ။
ယခုဖေါ်ပြပါ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစာရင်းနှင့် အခြေအနေအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ 
ပြန်ဆိုပြီး မိမိသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ သတင်းဌာနများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများသို့ အကြောင်းကြားကာ ၄င်းတို့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အထူးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဦးဝင်းမြင့်။ သီဟ။ ဇော်မင်းဦး။ မောင်မောင်လတ်။ သူရိန်အောင်။ မျိုးမင်း။ ညီညီဇော်။ ဦးခိုင်စိုး။(ကျန်းမာရေးမကောင်း။ထောင်ဝင်စာမရ)၊ ဦးဘမြင့်။ အောင်ကျော်စိုး (ထောင်ဝင်စာမရ)။ မုံရွာအောင်ရှင်။ ဦးတင်မြင့်။ ကိုဆန်ရ။ကိုရဲ၊ ဦးခင်မောင်ဝင်း။ ဦးနေမင်း(ကျန်းမာရေးမကောင်း) ၊ မာကီ။(ခ)ကျော်ကျော်ထွေး။မျိုးခင်။
ကျော်ဌေး(ထောင်ဝင်စာမရ) ကျန်းမာရေးမကောင်း။ ဥာဏ်ကြီး။ ကျော်မျိုးမင်း။ ကိုမျိုးသွေး။ နိုင်ယက္ခ။ ဇေယျအောင်။ ကျော်စိုးစိုး။ အောင်ကြီး။ ယူနွတ်၊ ကိုလတ်(ခ)၀င်းအေး။ဖြူလေး။
သက်နိုင်အောင်။ စိုးသိန်း(ခ)ရဲသီဟ(ထောင်ဝင်စာမရ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်း)။ စိုးညွန့်ဇော်။ အောင်ကိုဦး။သန်းဇော်ဦး။(ထောင်ဝင်စာမရ)။ ဦးခင်ဝင်း(ဘိုးတော်)။ ဦးတိသ။(ထောင်ဝင်စာမရ)။ ဦးအောင်နိုင်။(ထောင်ဝင်စာမရ)၊
Posted by Ko Niknayman at 7:54 PM